“Iran Waligeed La Gor-gortami Mayso Maraykanka”…. Madaxwayne Rouhani – Heemaal News Network
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa ku sheegay waqti uu si tooska dadka dalkiisa ugala hadlay Telefishanka in dalkiisu aanu marnaba horfadhiisanayn Maraykanka inta cadaadiska lagu hayo, sidoo kalena ay wax aan suura galayn tahay nabad ka islaaxda bariga dhexe Tehran la’aanteed.
“Iran waligeed gorgortan gali mayso iyada oo cadaadis saaran yahay, waligeen u-joojin mayno qaylada Maraykanka, wadahadalna la gali mayno cid walba oo aaminsan in aan ka diciifsanahay, qaasatan Ameericanka hor fadhiisan mayno inta ay cadaadiska nagu hayaan, dhamaan Cadaadiska ugu badan ee Mareykanku nagu hayana waa mid uu ku fashilmay, ” Madaxwayne Rouhani ayaa sidaas yidhi.
Xiisadaha u dhaxeysa Iran iyo Mareykanka ayaa sii kordhaysa tan iyo 2018, markii madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiskii Nuclearka ee 2015 ee u dhaxeeyay Tehran iyo lix quwadood oo caalami ah isla markaana Washington ay dib u soo celisay cunaqabateyntii saarneyd Tehran taas oo curyaamisay dhaqaalaheedii.
Madaxwayne Rouhani oo diirada saaraya bariga dhexe ayaa yidhi: “Sugida nabadgelyada iyo xasilloonida gobolkan xasaasiga ah ee Bariga Dhexe iyo gacanka Beershiya suurtagal maahan iyada oo aanay Iran gacan ka gaysan”